महिला शरीर धेरै जटिल संरचना छ। आखिर, सहन र भावी सन्तानलाई जन्म दिन, यो धीरज बल र स्वास्थ्य धेरै आवश्यक छ। एक चाहन्थे गर्भावस्था बारेमा धेरै महिला आफ्नो प्रजनन प्रणाली र विभिन्न आन्तरिक sensations को peculiarities कारण पत्ता लगाउन। त्यसैले, ovulation यदि तपाईं पछि तल्लो पेट खींचती, त्यसपछि यो एक चमत्कार के भयो को hallmarks एक छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बाहिर आंकडा सबै अवस्थामा, यी लक्षण मल के भयो संकेत कि प्रयास गर्नेछ।
यस्तो दुखाइ बारेमा gynecologists के
को दुखाइ ovulation अवधि भन्दा भाग को लागि कुनै पनि विकृति छैन। संसारमा gynecologists यी भावना बिल्कुल शारीरिक प्रक्रिया हो विश्वास गर्छन्। पीडादायी घटना विशेष गरी युवा बालिका लागि विशेषता (20 वर्ष मुनिका) हो, तर वयस्कता मा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
ovulation पछि दुखाइ को अवधि सम्बन्ध, यो 24 घण्टा अधिकतम लागि बेचैनी महसुस गर्न सामान्य मानिन्छ। लागि सबैभन्दा भाग महत्वपूर्ण बेचैनी पैदा गर्दैन र महिला संकेत समय को लागि स्वतन्त्र बित्दै यो घटना कुनै विशेष उपचार, आवश्यकता छैन।
जब यो डाक्टर गर्न स्वागत मा जान आवश्यक छ
48 घण्टा भन्दा बढी रहन्छ भन्ने बलियो दुखाइ मा तपाईं ध्यान भने, यो एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ भ्रमण गर्न सिफारिस गरिएको छ। एक सामान्य नियम रूपमा, कुनै पनि विकृति को खोज को मामला मा तपाईं analgesics वा हर्मोन गर्भ निरोधक चक्की तोकिएको गरिनेछ।
तपाईं डाक्टर भ्रमण अघि, तपाईं ovulation पछि पेट दुख्यो छ कसरी ध्यान, साथै स्वागत तपाईं लागि उपयोगी हुन सक्छ भनेर थप जानकारी भेला:
जो menstrual चक्रको दिन, तपाईं बेचैनी अनुभव छन्।
जहाँ दुखाइ भन्दा स्पष्ट महसुस हुन्छ स्थानहरू।
बेचैनी को अवधि।
यदि कुनै पनि अतिरिक्त लक्षण हो।
दुखाइ को सम्भावितकारणहरू
आत्म ovulation ovum को fallopian ट्यूब मा उत्पादन मल को सक्षम छ। को भर बालक जन्ममा वर्ष महिला, यो प्रक्रिया विभिन्न विशिष्ट चक्र छ र 21-35 दिनमा एक पटक औसत मा दोहोर्याइएको छ। केही अवस्थामा, सम्भव परिवर्तन चक्र मा, साधारण, घटना गर्भपतन र puerperium सहित केही बाह्य र आन्तरिक कारक, सम्बन्धित हुन सक्छ।
ovulation पछि दुखाइ कारण एक नम्बर द्वारा substantiated गर्न सकिन्छ। हामी के फरक समयमा एक महिलाको शरीर मा रहेको छ स्पष्ट गर्न सुरु गर्न प्रयास गर्नेछ को menstrual चक्रको चरणहरु। follicles वृद्धि विशेषता द्वारा अन्तिम menstrual अवधि पछि पहिलो दुई हप्ता। लगभग मा oocyte follicle उपज र ब्रेक, बरु एउटा तथाकथित पहेंलो शरीर को चौधौँ दिन हुन्छ।
ovulation तल्लो पेट खींचती गरेपछि भने, त्यसपछि यो कारण हुन सक्छ:
को follicle वृद्धि बेला ovary stretching।
सफलता अन्डा ovary पर्खाल।
न्यूनतम आन्तरिक रक्तस्राव ovary कारण ovulation समयमा पेट गुहा को जलन।
ovulation शारीरिक प्रकृति पछि भुँडी दुखाइ द्वारा निम्न लक्षण विशेषता सकिन्छ:
बेचैनी को अकस्मात्;
एक पक्ष मात्र दुखाइ को अनुभूति;
दुखाइ को नियमित मासिक वर्ण पुनरावृत्ति।
दुर्लभ अवस्थामा, रक्तस्राव को कमजोरी कमजोरी र वाकवाकी, दुखाइ को कटि क्षेत्रमा महसुस हुन सक्छ रोल गर्न, हुन सक्छ।
गर्भावस्था र पीडा ovulation पछि
ovulation तल्लो पेट खींचती र त्यहाँ सुरक्षा अनुपालन बिना यौन सहवास थियो पछि, त्यसपछि दायाँ प्रतिबिम्बित र परिवार थपिएको गर्न भने। यसलाई निरपेक्ष सटीक संग गर्भावस्था पुष्टि मात्र अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया हो, यो अप्रत्यक्ष संकेत गलत निष्कर्षमा तपाईं सक्छ सक्नुहुन्छ सम्झना गर्नुपर्छ। चित्रकला को भुँडी दुखाइ ovulation र असुरक्षित सहवास पछि राम्रो एक महिलाको शरीर नयाँ जीवन निस्कनु गर्न थाले, र त्यहाँ एक शक्तिशाली हर्मोन परिवर्तन छ भन्ने तथ्यलाई प्रतिबिम्बित हुन सक्छ।
कथित अवधारणा को मामला मा, ovulation पछि हुन्छ कि प्रक्रिया कस्तो छ? Ovum, शुक्राणु प्रकारका जहाँ यसलाई आफ्नो थप वृद्धि र विकास राख्नेछ को गर्भाशय, प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ जो एक zygote, भेटे। सामान्यतया zygote समेकन प्रक्रिया menstrual चक्रको अन्त्यमा पहिले देखि नै छ, र यो उहाँले अप्रिय sensations सँगसँगै थियो। अक्सर छुट्टयाएर दुखाइ र जस्तै गर्भावस्था को सम्भव संकेत खींच साथै:
मुड बारम्बार परिवर्तन;
बलियो Smells अस्वीकार;
अक्सर, तल्लो पेट मा झुनझुनी ovulation महिलाहरु गर्भावस्था को स्पष्ट चिन्ह फेला पछि। तथापि, दुखाइ को कारण एक संक्रमण, सुनिंनु, आन्तरिक आघात, हर्मोन परिवर्तन हुन सक्छ भनेर सचेत हुन।
तपाईं पहिले नै गर्भावस्था पुष्टि भने गरेको छ, र पेट दुखाइ, लामो समय को लागि जारी त्यसपछि यो राज्य - चासो को लागि एक कारण: यो एकदम सम्भव छ यो धम्की गर्भपात को एक चिन्ह हुन सक्छ।
रोग दुखाइ सँगसँगै
ovulation तल्लो पेट खींचती गरेपछि हुनुहुन्छ भने, यो पनि एक बरु गम्भीर स्वास्थ्य समस्या को उपस्थिति को एक चिन्ह हुन सक्छ। यी gynecological र अन्य रोगहरु सहित समावेश:
खाली डिम्बाशय cysts;
डिम्बाशय cysts वृद्धि कारण बिच्छेद;
प्रायजसो, ovulation पछि तल्लो पेट मा झुनझुनी छैन त खराब छ, तर तपाईं यो वास्तवमा बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि यसलाई राम्रो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् छ। उहाँले मात्र विस्तृत परीक्षा सञ्चालन र सबै आवश्यक परीक्षण गर्ने सल्लाह दिन्छन्, तर पनि दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्न सिफारिसहरू दिन्छ।
पेशेवरों पीडादायी ovulation
ovulation समयमा दुखाइ मा, त्यहाँ pluses छन्। कारण महिलाको शरीर जस्तै सुविधाहरू गर्न समय, बच्चाको अवधारणा लागि उपयुक्त गणना गर्न धेरै सजिलो छ। अथवा, त्यसको विपरीत, सुरक्षित दिन को आफ्नो तालिका सिर्जना गर्नुहोस्। निस्सन्देह, तपाईंले यस्तो डाटा 100 प्रतिशत भरोसा छैन, तर आफ्नो सत्यता को सम्भावना धेरै, धेरै उच्च छ।
गर्भवती महिला र यसको महत्त्व लागि उचित आहार
Pimafutsin (मैनबत्ती): निर्देशन, व्यावहारिक आवेदन, वास्तविक समीक्षा
जब ovulation हुन्छ, वा छिटो गर्भवती प्राप्त कसरी?
रैखिक मीटर मा सुदृढीकरण को एक टन कति
कसरी घर मा फिलिमहरु देखि अन्डा सफा गर्न: सुझावहरू
साइप्रस मा किनमेल। तपाईं के खरिद गर्न सक्नुहुन्छ?
संकलित जब धन को रसिद?
खनिज पानी "Narzan": उपयोगी गुणहरू, प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ र contraindications